ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲကသိမ်ငယ်မှုတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ…. – Trend.com.mm
Posted on October 12, 2018 October 12, 2018 by Shun Lei Phyo
သိမ်ငယ်မှုတွေကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာကိုဦးဆုံးမပြောခင်မှာ ဘယ်လိုလူတွေက ကိုယ့်ဘ၀ကို သိပ်ငယ်တတ်သလဲဆိုတာ အရင်ပြောပြပေးချင်တယ် ဒါမှလည်းကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်တကယ်နားလည်နိုင်မှာမလို့ပါ…သိမ်ငယ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာတစ်ချိန်လုံးငိုနေတတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူး…သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဆုံးရှုံးရတဲ့အရာတွေများလာတဲ့အခါ ၊ ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ ကိုယ်ကြည်ညိုအားကိုးရတဲ့တံတိုင်းကြီးတစ်ခုကျိုးပဲ့သွားတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းဝိုင်းကြားမှာမျက်နှာငယ်စွာကြီးပြင်းလာရတဲ့အခါ ဒီလိုလူတွေစိတ်ထဲမှာ သူများထက်ပိုသိမ်ငယ်စိတ်တွေများနေတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အားနေတဲ့အချိန်တွေ အလုပ်မရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ ပေါက်ပန်းလေးဆယ်တွေလျှောက်တွေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားမလိုအားမရတဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတာမျိုးဟာသိမ်ငယ်နေတဲ့သူတွေပါပဲ..ဒီလိုအတွင်းစိတ်ထဲကသိမ်ငယ်မှုတွေကြောင့်မလိုအပ်ပဲ တစ်ခြားသူတွေကို ပတ်ရမ်းမယ် မကောင်းမြင်မယ် ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက် ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်အနေနဲ့ပုံချမယ် …ကိုယ့်ဘေးနားမှာနေပြီးကိုယ့်အပေါ်ကောင်းစေချင်လို့ဖေးမတဲ့သူတွေကိုအရွဲ့တိုက်လာမယ်…ဒါမျိုးတွေလုပ်နေရင် သတိရလိုက်ပါ သင့်ဘ၀မပြည့်စုံမှုကို သင်မကြိုးစားပဲ တစ်ပါးသူကိုမဲနေမိတယ်ဆိုတာ…ဆိုတော့ ဒီလိုသိမ်ငယ်မှုတွေကို ဘယ်လို ပြန်ပြီး Motivation မြှင့်မလဲ…
(၁) ငါ့မှာ ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အရည်အချင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာ သိအောင်လုပ်ပါ
သိမ်ငယ်တတ်တဲ့သူတော်တော်များများဟာ ကိုယ်ဘာတော်လို့တော်မှန်း ဘာအရည်ချင်းရှိလို့ရှိမှန်းမရှာဖွေပဲ ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး ဘာအရည်ချင်းမှမရှိဘူးလို့ပဲထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရှာဖွေပါ။
(၂) ကိုယ့်ကို လေးစားသူ ကိုယ့်စိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနေတတ်တဲ့သူရဲ့အနားမှာနေပါ
ကိုယ်ဘယ်လိုအခြေနေရောက်ရောက်ကိုယ့်ဘေးနားကနေ ကိုယ့်ကိုတော်တယ် လုပ် ကြိုးစားမိုက်တယ် ဆိုတာမျိုးအားပေးနေတဲ့သူမျိုးကို ဘယ်တော့မှမစွန့်ခွာပါနဲ့။သူတို့ရဲ့အားပေးမှုကသင့်အတွက်သိပ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။
(၃) သင့်ကိုကဲ့ရဲ့နှိမ်ချခဲ့သူတွေကို တေးထားပါ
ကလဲ့စားချေခိုင်းမုန်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်တန်သူတို့ပါးစပ်ဖျားမှာ ကိုယ်ဟာ ထင်ပေါ်နေသူတစ်ယောက် မဟုတ်ရင်တောင် သူတို့ပြောချင်တိုင်းပြောဆိုချင်တိုင်းဆိုလို့ မရတော့တဲ့သူမျိုးဖြစ်နေပါစေ။
ကိုယ်ပျင်းနေမှန်းသိရင် ပြင်ပါ၊ ကိုယ်တိုင်လိုအပ်နေမှန်းသိရင် ကိုယ်တိုင်ပြင်ပါ၊ ကြိုးစားချင်စိတ်လိုနေမှန်းသိရင်ကြိုးစားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကို သိမ်ငယ်ပြီးသူတစ်ပါးပေါ် မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့လောကကြီးမှာဘယ်မရာမှကိုယ်တိုင်မကြိုးစားပဲလွယ်လွယ်မရပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်မကြိုးစားပဲလွယ်လွယ်ရခဲ့ရင်တောင်ဒီလိုအရာတွေကမစစ်မှန်လို့ကြာကြာမခံပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကိုယ်ကြိုးစားလို့ရတဲ့အရာတွေကို သာမက်မောပြီးသိမ်ငယ်မှုတွေဖယ်ဖြောက်ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရှာတွေ့နိုင်ပါစေ….
သိမျငယျမှုတှကေို ဘယျလိုဖယျရှားရမလဲဆိုတာကိုဦးဆုံးမပွောခငျမှာ ဘယျလိုလူတှကေ ကိုယျ့ဘဝကို သိပျငယျတတျသလဲဆိုတာ အရငျပွောပွပေးခငျြတယျ ဒါမှလညျးကိုယျ့စိတျကို ကိုယျတကယျနားလညျနိုငျမှာမလို့ပါ…သိမျငယျတယျဆိုတဲ့သူတှဟောတဈခြိနျလုံးငိုနတေတျတာလားဆိုတော့မဟုတျပွနျဘူး…သူတို့စိတျထဲမှာ ဆုံးရှုံးရတဲ့အရာတှမြေားလာတဲ့အခါ ၊ ဘာလုပျလုပျအဆငျမပွတောတှဖွေဈလာတဲ့အခါ၊ ကိုယျကွညျညိုအားကိုးရတဲ့တံတိုငျးကွီးတဈခုကြိုးပဲ့သှားတဲ့အခါ၊ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြအသိုငျးဝိုငျးကွားမှာမကျြနှာငယျစှာကွီးပွငျးလာရတဲ့အခါ ဒီလိုလူတှစေိတျထဲမှာ သူမြားထကျပိုသိမျငယျစိတျတှမြေားနတေတျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အားနတေဲ့အခြိနျတှေ အလုပျမရှိတဲ့အခြိနျတှမှော ပေါကျပနျးလေးဆယျတှလြှေောကျတှေးပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအားမလိုအားမရတဲ့ယုံကွညျမှုကငျးမဲ့နတောမြိုးဟာသိမျငယျနတေဲ့သူတှပေါပဲ..ဒီလိုအတှငျးစိတျထဲကသိမျငယျမှုတှကွေောငျ့မလိုအပျပဲ တဈခွားသူတှကေို ပတျရမျးမယျ မကောငျးမွငျမယျ ကိုယျ့ရဲ့အားနညျးခကျြ ကိုယျ့ရဲ့လိုအပျခကျြကို သူတဈပါးရဲ့အပွဈအနနေဲ့ပုံခမြယျ …ကိုယျ့ဘေးနားမှာနပွေီးကိုယျ့အပျေါကောငျးစခေငျြလို့ဖေးမတဲ့သူတှကေိုအရှဲ့တိုကျလာမယျ…ဒါမြိုးတှလေုပျနရေငျ သတိရလိုကျပါ သငျ့ဘဝမပွညျ့စုံမှုကို သငျမကွိုးစားပဲ တဈပါးသူကိုမဲနမေိတယျဆိုတာ…ဆိုတော့ ဒီလိုသိမျငယျမှုတှကေို ဘယျလို ပွနျပွီး Motivation မွှငျ့မလဲ…
(၁) ငါ့မှာ ဒီလိုကောငျးမှနျတဲ့အရညျအခငျြးတှရှေိတယျဆိုတာ သိအောငျလုပျပါ
သိမျငယျတတျတဲ့သူတျောတျောမြားမြားဟာ ကိုယျဘာတျောလို့တျောမှနျး ဘာအရညျခငျြးရှိလို့ရှိမှနျးမရှာဖှပေဲ ဘာမှမလုပျတတျဘူး ဘာအရညျခငျြးမှမရှိဘူးလို့ပဲထငျတတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ဦးဆုံးကိုယျ့ကိုယျကိုယျရှာဖှပေါ။
(၂) ကိုယျ့ကို လေးစားသူ ကိုယျ့စိတျကိုမွှငျ့တငျပေးနတေတျတဲ့သူရဲ့အနားမှာနပေါ
ကိုယျဘယျလိုအခွနေရေောကျရောကျကိုယျ့ဘေးနားကနေ ကိုယျ့ကိုတျောတယျ လုပျ ကွိုးစားမိုကျတယျ ဆိုတာမြိုးအားပေးနတေဲ့သူမြိုးကို ဘယျတော့မှမစှနျ့ခှာပါနဲ့။သူတို့ရဲ့အားပေးမှုကသငျ့အတှကျသိပျကိုခှနျအားဖွဈစပေါတယျ။
(၃) သငျ့ကိုကဲ့ရဲ့နှိမျခခြဲ့သူတှကေို တေးထားပါ
ကလဲ့စားခခြေိုငျးမုနျးခိုငျးတာမဟုတျပါဘူး။ အခြိနျတနျသူတို့ပါးစပျဖြားမှာ ကိုယျဟာ ထငျပျေါနသေူတဈယောကျ မဟုတျရငျတောငျ သူတို့ပွောခငျြတိုငျးပွောဆိုခငျြတိုငျးဆိုလို့ မရတော့တဲ့သူမြိုးဖွဈနပေါစေ။
ကိုယျပငျြးနမှေနျးသိရငျ ပွငျပါ၊ ကိုယျတိုငျလိုအပျနမှေနျးသိရငျ ကိုယျတိုငျပွငျပါ၊ ကွိုးစားခငျြစိတျလိုနမှေနျးသိရငျကွိုးစားပါ။ ကိုယျ့ရဲ့အားနညျးခကျြတှကေို သိမျငယျပွီးသူတဈပါးပျေါ မတိုကျခိုကျပါနဲ့။
နောကျဆုံးပွောခငျြတာကတော့လောကကွီးမှာဘယျမရာမှကိုယျတိုငျမကွိုးစားပဲလှယျလှယျမရပါဘူး။ ကိုယျတိုငျမကွိုးစားပဲလှယျလှယျရခဲ့ရငျတောငျဒီလိုအရာတှကေမစဈမှနျလို့ကွာကွာမခံပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ကိုယျကွိုးစားလို့ရတဲ့အရာတှကေို သာမကျမောပွီးသိမျငယျမှုတှဖေယျဖွောကျကာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျရှာတှနေို့ငျပါစေ….
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး (Aspirin) ရဲ့ တမူထူးခြားအသုံးဝင်ပုံများ